Ny emeraoda lehibe indrindra eto an-tany - Vaovao farany 2021 - Video Vaovao
Ny emeraoda lehibe indrindra eran'izao tontolo izao dia Inkalamu, ilay Lion Emerald fa The Bahia Emerald dia heverina ho emeraoda lehibe indrindra hita hatramin'izay.
Miankina amin'ny fahitantsika ny sakana misy vato maromaro na kristaly tokana.
Ny emeraoda lehibe indrindra eto an-tany nahita
Ny emeraoda lehibe indrindra eto an-tany dia ny Bahia Emerald: carat 1,700,000
Ny Bahia Emerald dia misy iray amin'ireo zaridaina tokana lehibe indrindra hita hatramin'izay. Ny vato, milanja 341 kg na karaka 1,700,000 2005 XNUMX eo ho eo, dia avy tany Bahia, Brezila ary kristaly tafiditra ao anaty vatolampy. Tsy afa-nandositra tamin'ny tondra-drano nandritra ny rivodoza Katrina tamin'ny XNUMX izy io nandritra ny fotoana nitahirizana trano fitehirizana entana tany New Orleans.
Nisy ny fifanolanana momba ny fananana rehefa voalaza fa nangalarina tamin'ny volana septambra 2008 avy amin'ny trano fiantohana azo antoka any South El Monte any Los Angeles County, California. Tao no nahitana ilay vatosoa ary efa voalamina ny raharaha sy ny fananany. 400 tapitrisa dolara ny vidin'ny vato, saingy tsy mazava ny tena sandany.
Nisy emeraoda karaty 180,000 XNUMX goavambe vao nongotana tato ho ato
Ny vatosoa karaty 180,000 goavambe dia vao nofongarin'ny mpitrandraka ao amin'ny Carnaiba Mine any Brezila. Ity santionan'ny emeraoda tsy mampino ity dia mahatratra 4.3 metatra ny halavany ary mitentina 309 tapitrisa dolara eo ho eo.
Ilay vato dia hita tao amin'ny faritra iray any Brezila fantatra fa mamokatra vatosoa mahafinaritra, ny Carnaiba Mine ao amin'ny fanjakan'ny Pernambuco. Nahita 200 metatra ny halalin'ny vatosoa vatosoa tao amin'ilay toeram-pitrandrahana ary nitaky olona 10 herinandro iray manontolo hanalana sy hampiakatra ilay cluster ho etỳ ambonin'izy ireo.
Ity santionany ity dia voaforona karaoty berily emerazy 180,000. Raha jerena ny habeny, ny fahita ary ny isan'ny kristaly, dia tombanan'ny manam-pahaizana fa mety ho 309 tapitrisa dolara ny santionany.
Ny kristaly emeraoda lehibe indrindra eto an-tany dia ny Inkalamu, ilay Lion Emerald: karatra 5,655
Ny emeraoda lehibe indrindra eto an-tany, milanja 1.1kg ary mitentina £ 2m, dia hita tao amin'ny toeram-pitrandrahana iray any Zambia. Ilay vatosoa 5,655 carats dia hitan'ny orinasam-pitrandrahana Gemfields ao Kagem, toeram-pitrandrahana emeraoda lehibe indrindra eran-tany, tamin'ny 2 Oktobra 2020.
Nantsoina hoe Inkalamu izy, izay midika hoe liona amin'ny fiteny Bemba eo an-toerana. Nilaza i Gemfields fa vato tsy fahita firy sy sarobidy indrindra no omena anarana. Nomena anarana Bemba ho fanomezam-boninahitra ny asa fiarovana ny orinasa mpitrandraka.
The Emerald Unguentarium: karatra 2,860
Ny Emerald Unguentarium, vazy emeraoda 2,860 ct (20.18 oz) voasokitra tamin'ny 1641, dia aseho ao amin'ny Imperial Treasury, Vienna, Austria.
The Holy Emerald Buddha: karat 2,620
Namboarina avy tamin'ny emeraoda Zambiana 3,600 tamin'ny 2006, ny sary vongana Sacred Emerald Buddha dia milanja 2,620 ct.
Ny solontenan'ny Siddhartha Gautama dia iray amin'ireo vatosoa voasokitra lehibe indrindra eto an-tany. Izy dia naseho tamin'ny toeran'ny mudra mahazatra izay mifandraika amin'ny fampirisihana ny mpianakaviny (ny sangha na ny fisoronana) hampitsahatra ny fifandirana eo amin'izy samy izy.
Milanja 2,620 karat, manana loko maitso manga maitso (noho ny fahalotoan'ny chromium sy vanadium), amiko ny loko tsara indrindra ho an'ny emeraoda, ary somary tsy ampidirina.
Tsy dia fahita firy ny manana karazana kalitao toy izany raha oharina amin'ny vatosoa endrika, ka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny orinasa handrafitra azy dia fahasahisanana. Ny sary sokitra «master jade» antsoina hoe Aung Nyein, avy any Burma saingy monina any Thailandy no nanasoketana azy io.
The Guinness Emerald Crystal: karatra 1,759 XNUMX
Ny Guinness Emerald Crystal hita tao amin'ny toeram-pitrandrahana emaranta Coscuez dia iray amin'ireo kristaly amera amidy kalitao indrindra eto an-tany, ary kristaly emeraoda lehibe indrindra ao amin'ny fanangonana kristaly an'ny Banco Nacionale de la Republica any Bogota, renivohitry ny Kolombia.
Ny fiavian'ilay anarana hoe Guinness dia tsy fantatra, fa ilay lava, 1759-karat, kristaly maitso mamirapiratra dia tsy isalasalana fa nanana ny fahazoan-dàlana rehetra hiditra ao amin'ny bokin'ny Guinness misy firaketana an'izao tontolo izao ho toy ny vatosoa lehibe indrindra eto an-tany farafaharatsiny mandritra ny taona vitsivitsy izy io dia nihoaran'ny kristaly emeraoda lehibe kokoa.
Ny emeradera LKA miisa 1,686.3 sy ny karajiazy 1,438
Ny tetika voajanahary dia mamorona zavatra tena mahasakana ny fony amin'ny fahalehibeazany. Ny valiny 1,686.3 LKA sy ny karaoty 1,438 an'ny Stephenson hita tamin'ny 1984 sy 1969.
Raha ny marina dia ao anatin'ny faritra Hiddenite no isan'ireo vato mahavariana indrindra eran'izao tontolo izao, saingy ny manam-pahaizana momba ny vatosoa dia mihevitra ireto vato voajanahary roa lehibe sy kristaly mahatalanjona ireto eo amin'ny emeraly lehibe indrindra eran'izao tontolo izao: ny LKA sy Stephenson.
Mim Emerald: carat 1,390
Kristaly lehibe, di-hexagonal prismatika misy karatra 1,390 tsy voapaika miaraka amin'ny loko maitso lalina. Mangarahara izy io ary misy fampidirana vitsivitsy ao amin'ny 2/3 ambony, ary mamirapiratra amin'ny faritra ambany. Trano ao amin'ny Musium Mim, Beirut, Libanona.
Duke of Devonshire Emerald: karatra 1,383.93 XNUMX
Ny Duke of Devonshire Emerald dia iray amin'ny vatosoa lehibe indrindra sy malaza indrindra manerantany, milanja karatra 1,383.93 6. Niainga tao amin'ny toeram-pitrandrahana ao Muzo, Colombia, na fanomezana na amidin'ny Emperora Pedro I avy any Brezila ho an'i William Cavendish, Duke faha-1831 an'ny Devonshire tamin'ny 1851. Naseho tamin'ny fampirantiana lehibe tany Londres tamin'ny taona 2007, ary vao haingana tao amin'ny Natural Museum momba ny tantara tamin'ny XNUMX
The Isabella Emerald: karatà 964
Ny Isabella Emerald, vato voapaika karatà 964, dia fananan'ny Archeological Discovery Ventures, LLC.
Isabella Emerald dia nahazo ny anarany avy tamin'ny Queen Isabella avy any Portugal, ny vadin'ny mpanjaka Charles V (1516 ka hatramin'ny 1556), ny Emperora Romana Masina, ny Mpanjaka Espana, ary ny Archduke of Austria, izay nandova empira midadasika nanerana an'i Eropa, avy any Espana ary ny Netherlands mankany Austria ary ny fanjakan'i Naples, ary koa ny faritany ampitan'i Etazonia Amerika.
Naniry fatratra ilay kristaly i Queen Isabella ary naniry mafy ny hanana azy, rehefa avy nandre ny kaonty mamirapiratra momba ny vato avy any Hernan Cortez, tao amin'ny taratasy iray nosoratany taminy avy any Mexico. Ny vatosoa fantatra amin'ny anarana hoe "Emerald of Judgment" mystical dia natolotra an'i Cortez, avy amin'i Montezuma II, ny Mpanjakan'ny fanjakana Aztec, tamin'ny fotoana nidiran'i Cortez tao an-tanànan'i Tenochtitlan niaraka tamin'ny tafiny tamin'ny 8 Novambra 1519. Hernan Cortez no nanonona ny vatosoa ho fanomezam-boninahitra an'i Queen Isabella, vadin'ny mpanjakavavy Charles V, ny Emperora Romana Masina ary ny Mpanjaka Espana.
Ny Gachalá Emerald: carat 858
Ny Gachalá Emerald, iray amin'ireo emeraoda sarobidy indrindra eran'izao tontolo izao, dia hita tamin'ny taona 1967, tao amin'ny toeram-pitrandrahana antsoina hoe Vega de San Juan, any Gachala, tanàna iray any Kolombia, 142 km miala an'i Bogota. Gachalá Chibcha dia midika hoe “toerana misy an'i Gacha.” Amin'izao fotoana izao ny kristal dia any Etazonia, izay nanoloran'ny mpanao firavaka an'i New York City, Harry Winston, ho an'ny Smithsonian Institution.
Ny Patricia Emerald: karate 632
Ny Patricia dia endrika lehibe sy miloko miavaka. Amin'ny karàta 632, ny kristaly dihexagonal, na roa ambin'ny folo, dia heverina ho iray amin'ireo emeraodaera lehibe eto an-tany. Hita tany Kolombia tamin'ny 1920, io dia nomena ny anaran'ny zanakavavin'ny tompona toeram-pitrandrahana.
Ny lesoka ato amin'ity kristaly ity dia ara-dalàna fa manimba ny faharetan'ny vatosoa mafy. Ity santionany ity dia iray amin'ireo emeralda lehibe vitsivitsy izay notehirizina tsy namboarina. Ankehitriny, i Kolombia dia mbola loharanon'ny emeraoda lehibe manerantany.
Ny Mogul Mughal Emerald: carats 217.80
Ny Mogul Mughal Emerald dia iray amin'ireo emeraoda lehibe indrindra fantatra. Ny trano varotra Christie's dia nanoritsoritra azy hoe:
Ny emeraoda voahitsaka mahitsizoro fantatra amin'ny anarana hoe The Mogul Mughal milanja karatra 217.80, ilay sokitra voasokitra amin'ny fiantsoana Shi'a amin'ny soratra naskh kanto, tamin'ny taona 1107 H, ny sary sokitra nosokirany ravina ravina ravina, ny rosette afovoan'ny felam-boninkazo lehibe tokana, miaraka amin'ny tsipika voninkazo poppy kely telo kokoa avy amin'ny lafiny roa, ny sisiny beveled voasokitra miaraka amin'ny fihenan'ny lamosina sy ny ravaky ny herringbone, ny lafiny efatra dia nolavahana ho an'ny fametahana, 5.2 * 4.0 * 4.0 cm.
Tany Kolombia no nitrandrahana azy tamin'ny voalohany, namidy tany India izy io, izay toerana tena nirian'ny mpitondra fanjakana Mughal. Ny Mogul Mughal dia miavaka eo amin'ny kristaly Mughal amin'ny fitondrana daty - 1107 H (1695-1696 AD) - izay ao anatin'ny fanjakan'i Aurangzeb, amperora fahenina. Na izany aza, ny mpitondra Mughal dia Sunni, fa ny soratra, Salawat heterodoksa natokana ho an'i Hassan ibn Ali sy Husayn ibn Ali fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Nad e Ali, dia Shi'a, izay azo inoana fa tsy an'i Aurangzeb, fa an'ny iray amin'ireo ny tandapany na ny manamboninahiny.
Namidy tamin'ny 27 septambra 2001 i Christie's tamin'ny vidiny 1,543,750, anisan'izany ny vidin'ny mpividy. Hatramin'ny 17 Desambra 2008 dia tao amin'ny Museum of Islamic Art, Doha, Qatar izany.
Ny Emperoran'i Carolina: carat 64
Ny amperora karatra 64.82 dia mametraka ny tendron'ny NC eo amin'ny sarintany! Ity Emeralda avaratr'i North Carolina malaza ity dia voalaza fa avy amin'ny firavaka mitovy amin'ny an'i Catherine the Great.
Ilay emperora dia manana emeraoda kolombiana tsara tarehy hexagonal miendrika hexagonal misy diamondra manodidina ny emeraoda amin'ny brooch izay amidy tamin'ny lavanty Christie $ 1.65 tapitrisa. Ny Emperora Carolina, hita teny an-toerana tany Hiddenite, NC, dia novidiana tamin'ny taon-dasa ary natolotra ho an'ny North Carolina Museum of Natural Science ao Raleigh, NC.
Ny ampahany lehibe indrindra amin'izany rehetra izany dia ny nangatahan'ilay mpanome fanampiana tsy hitonona anarana. Ny fampirantiana ao amin'ny tranombakoka dia voalaza fa manana kristaly telo tsy voapaika. Ny lehibe indrindra amin'ireo vato milanja karatra 1,225 ireo dia loko maitso manga maniry izay azo ampitahaina amin'ireo vatosoa Muzo tadiavina fatratra.
Emerald an'ny Saint Louis: carat 51.60
Ny emeraoda Saint-Louis izay nandravaka ny satro-boninahitry ny Mpanjaka any Frantsa dia avy amin'ny toeram-pitrandrahana any Austria ary koa ny ankamaroan'ny emeraly eropeana taloha. Ireo toeram-pitrandrahana ireo dia nahomby hatramin'ny taonjato faha-19, saika hatramin'ny nahitana ny tahiry Urals tamin'ny 1830.
The Chalk Emerald: karatra 37.82
Ny mpitondra fanjakana ao amin'ny State of Baroda, fanjakana andriana any India, dia tompon'ny vato taloha. Io no afovoan'ny rojo emeraoda sy diamondra nanaovan'ny Maharani Saheba, izay nampita izany tamin'ny zanany lahy, Maharajah Cooch Behar.
Tamin'ny taonjato faha-20, ny vatosoa dia nesorina tamin'ny lanjany 38.40 karat (7.680 g) ary napetraka tao amin'ny peratra noforonin'i Harry Winston, Inc., izay voahodidin'ny diamondra miisa enimpolo, feno karat 15 eo ho eo.
Ny peratra dia natolotr'Andriamatoa sy Ramatoa O. Roy Chalk ho an'ny Smithsonian History History Museum tamin'ny 1972 ary ao anatin'ny ilay SmithsonianFanangonana nasionaly sy harena an-kibon'ny firenena.
Emeraody tsy fantatra anarana
Carat 7,052 karat tsy voahidy kristiana avy any Kolombia, fananana manokana ary heverina ho tsy voavidim-bola.
Karatra 1,965 karaty tsy voapaika rosiana, aseho ao amin'ny Museum History Natural any amin'ny faritr'i Los Angeles.
Vatosoa vatosoa tsy voatonona sy tsy voatonona anarana avy amin'ny Hiddenite, NC, fananana 1,861.90-ct iray, tompona manokana. Hita tamin'ny taona 2003, io no emeraoda lehibe indrindra fantatra hita tany Amerika Avaratra.
Krystaly lehibe dimy tsy voalaza anarana avy any Muzo, Colombia, voatahiry ao amin'ny trano fitobian'ny Bank of the Republic of Colombia, milanja 220 karat ka hatramin'ny 1,796 karat.
Fred Leighton dia nivarotra karatra 430 voasokitra tamin'ny vato Mughal tamin'ny dolara an-tapitrisany maro.
izy al-Sabah Collection avy any Koety dia misy vato tsara tarehy maro, ao anatin'izany ny kristaly karat 398 miendrika hexagonal sy ny vakana kristaly 235 carats.
Ny kaopy misy divay Mughal tamin'ny taonjato faha-17, kristaly, volamena ary verinia, amidy tany amin'i Christie tamin'ny vidiny 7 tapitrisa tamin'ny 1.79.
Karaty 161.20 voasokitra tamin'ny vato Mughal dia nahazo $ 1.09 tapitrisa tao Christie tamin'ny taona 1999.
Ny emeraoda sandoka lehibe indrindra eto an-tany
Teodora: carat 57,500
Ilay vatom-bato maitso 11.5 kilao dia notondroina ho emeraoda lehibe indrindra manerantany ary nantsoina hoe Teodora, anarana iray izay nalaina avy tamin'ny teny grika ary midika hoe “fanomezana avy amin'andriamanitra.”
Ny vatosoa, na izany aza, dia mety tsy ilay vato mitentina 1 tapitrisa dolara nopetahan'ny tompony Regan Reaney nampiroborobo azy ho.
Nosamborina Andriamatoa Reaney ny volana Janoary 2012 tao Kelowna ao afovoan'i BC, satria nosamborin'ny polisy Royal Canadian Mounted izy. Voarohirohy tamina heloka bevava maro hosoka tany Atoa Andriamatoa Reaney, hoy ny RCMP tao anaty fanambarana fohy, ary ny Polisy ao Hamilton dia nahazo fampisamborana miavaka noho ny fisamborana azy.
Andriamatoa Reaney dia tsy fantatry ny polisy Kelowna teo aloha, saingy tsy nahatsapa ny fahatsapana hitana endrika ambany izy. Izy dia nanana vatosoa sarobidy watermelon hamidy, rahateo.
Raha ny marina dia tena beryla io, fa nolokoana.
Ny emeraoda lehibe indrindra eto an-tany: FAQ
Ohatrinona ny emeraoda lehibe indrindra eto an-tany?
Ny vatosoa lehibe indrindra eran'izao tontolo izao izay hita tsy sarona tao anaty zaridaina tokana, milanja karatra 1.7 tapitrisa eo ho eo, na 752 lbs ny Bahia Emerald. Tany amin'ny faritra Bahia atsinanan'i Brezila no nahitana azy. Ilay vato goavambe, izay mipetraka ao amin'ny tranombakoka ao Los Angeles ankehitriny, dia mety mitentina $ 925 tapitrisa.
Iza no tompon'ny emeraoda lehibe indrindra eto an-tany?
Ny kristaly lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, milanja 1.1 Kg ary mitentina £ 2m, dia hita tao amin'ny toeram-pitrandrahana iray any Zambia. Ilay vatosoa 5,655 carats dia hitan'ny orinasam-pitrandrahana Gemfields ao Kagem, toeram-pitrandrahana emeraoda lehibe indrindra eran-tany, tamin'ny 2 Oktobra 2020.
Bebe kokoa fampahalalana momba ny vatosoa ary amidy emeraoda ao amin'ny fivarotanay
Ity teny ity dia nampakarina tao Vaovao ary tagged emeraoda lehibe indrindra, emeraoda lehibe indrindra eto an-tany, emeraoda lehibe indrindra, emeraoda lehibe indrindra eto an-tany, emeraoda lehibe indrindra eran-tany.